လက်ရှိတိုက်စစ်မှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဟီမီနက်ဇ်ကို အာဆင်နယ်အလိုရှိနေ - Arsenal Myanmar News
လက်ရှိတိုက်စစ်မှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဟီမီနက်ဇ်ကို အာဆင်နယ်အလိုရှိနေ
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်ကြတဲ့ အလက်ဇန်းဒါး လာကာဇက်နဲ့ ပျယ်-အမ်မရိခ် အူဘာမီယန်းတို့နေရာမှာ ပြန်လည်အစားထိုးဖို့ ဝုလ်ဗာဟမ့်ပ်တန် ဝမ်းဒါးရားစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ် ဟီမီနက်ဇ်ကို အလိုရှိနေတယ်လို့ ပြင်သစ်အခြေစိုက် Le 10 Sport က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် သက်တမ်းတိုးဖို့ လက်ရှိအချိန်အထိ အောင်မြင်မှုမရသေးတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂါဘွန်သားကို နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာက ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းချင်နေပေမယ့် လာကာဇက်ကတော့ စပိန်သားနည်းပြအကြိုက် တိုက်စစ်မှူးမျိုး မဟုတ်တာကြောင့် သင့်တော်တဲ့ ဈေးရမယ်ဆိုရင် ရောင်းချသွားဖို့လည်း ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ကွင်းလယ်နဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအတွက် အားဖြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အာတီတာအတွက် ဒီရက်ပိုင်းမှာ အသင်းပိုင်ရှင် ခရိုယန်ကီတွေရဲ့ ငွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ရရှိထားခဲ့တဲ့အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အစမ်းသပ်ခံပြီးဖြစ်တဲ့ မက္ကဆီကန်လက်ရွေးစင်ဟာ အဓိကကျတဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ အရွေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဝုလ်ဗ်စ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘင်ဖီကာအသင်းကနေ အငှားနဲ့ လာကစားပြီး ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ ယူရိုသန်း ၃၀ နဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ ဟီမီနက်ဇ်ဟာ ဒီရာသီမှာလည်း ဆက်လက်ခြေစွမ်းပြနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုး ၁၇ ဂိုး ရရှိထားချိန်မှာ သူ့ရဲ့ အားပါလျင်မြန်တဲ့ ကစားပုံနဲ့ လေထဲမှာ ကောင်းမွန်ပုံတွေက အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအတွက် ရင်ခုန်စရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
လက်ရှိပေါက်ဈေး ယူရိုသန်း ၅၀ ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီတိုက်စစ်မှူးအပြင် အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ တခြားတိုက်စစ်မှူးသုံးဦးလောက်ကိုပါ စောင့်ကြည့်နေပြီး ဒီထဲမှာ ဆဲလ်တစ်ရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး အော့ဒ်ဆွန်း အေဒူယာလည်း ပါဝင်နေတယ်လို့ သိရပြီး လာမယ့်ရာသီကုန်မှာ တိုက်စစ်ပိုင်း အပြောင်းအလဲတွေကို စောင့်ကြည့်ရဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း ပြင်သစ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနက ရေးသားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
REF: LE 10 SPORT & DAILY EXPRESS
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ လာမယျ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ အသငျးကနေ ထှကျခှာသှားနိုငျတဲ့ တိုကျစဈမှူးတှဖွေဈကွတဲ့ အလကျဇနျးဒါး လာကာဇကျနဲ့ ပယျြ-အမျမရိချ အူဘာမီယနျးတို့နရောမှာ ပွနျလညျအစားထိုးဖို့ ဝုလျဗာဟမျ့ပျတနျ ဝမျးဒါးရားဈအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး ရာအူးလျ ဟီမီနကျဇျကို အလိုရှိနတေယျလို့ ပွငျသဈအခွစေိုကျ Le 10 Sport က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသငျးနဲ့ စာခြုပျသဈ သကျတမျးတိုးဖို့ လကျရှိအခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုမရသေးတဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဂါဘှနျသားကို နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာက ဆကျလကျထိနျးသိမျးခငျြနပေမေယျ့ လာကာဇကျကတော့ စပိနျသားနညျးပွအကွိုကျ တိုကျစဈမှူးမြိုး မဟုတျတာကွောငျ့ သငျ့တျောတဲ့ ဈေးရမယျဆိုရငျ ရောငျးခသြှားဖို့လညျး ရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ကှငျးလယျနဲ့ ခံစဈပိုငျးအတှကျ အားဖွညျ့မှုတှေ ပွုလုပျဖို့ စီစဉျထားတဲ့ အာတီတာအတှကျ ဒီရကျပိုငျးမှာ အသငျးပိုငျရှငျ ခရိုယနျကီတှရေဲ့ ငှထေုတျပေးမယျဆိုတဲ့ စကားကို ရရှိထားခဲ့တဲ့အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အစမျးသပျခံပွီးဖွဈတဲ့ မက်ကဆီကနျလကျရှေးစငျဟာ အဓိကကတြဲ့ အပွောငျးအလဲနဲ့ အရှတေ့ဈခုလညျးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဝုလျဗျဈကို ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘငျဖီကာအသငျးကနေ အငှားနဲ့ လာကစားပွီး ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့လို့ ယူရိုသနျး ၃၀ နဲ့ ချေါယူထားခဲ့တဲ့ ဟီမီနကျဇျဟာ ဒီရာသီမှာလညျး ဆကျလကျခွစှေမျးပွနပွေီး ပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုး ၁၇ ဂိုး ရရှိထားခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ အားပါလငျြမွနျတဲ့ ကစားပုံနဲ့ လထေဲမှာ ကောငျးမှနျပုံတှကေ အာဆငျနယျပရိသတျတှအေတှကျ ရငျခုနျစရာလညျးဖွဈနပေါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
လကျရှိပေါကျဈေး ယူရိုသနျး ၅၀ ဝနျးကငျြမှာ ရှိနတေဲ့ ဒီတိုကျစဈမှူးအပွငျ အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ တခွားတိုကျစဈမှူးသုံးဦးလောကျကိုပါ စောငျ့ကွညျ့နပွေီး ဒီထဲမှာ ဆဲလျတဈရဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး အော့ဒျဆှနျး အဒေူယာလညျး ပါဝငျနတေယျလို့ သိရပွီး လာမယျ့ရာသီကုနျမှာ တိုကျစဈပိုငျး အပွောငျးအလဲတှကေို စောငျ့ကွညျ့ရဖှယျရှိကွောငျးလညျး ပွငျသဈအခွစေိုကျသတငျးဌာနက ရေးသားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-24T18:46:43+00:00	July 24th, 2020|News|Comments Off on လက်ရှိတိုက်စစ်မှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဟီမီနက်ဇ်ကို အာဆင်နယ်အလိုရှိနေ
အက်သလက်တီကိုနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ကြား ပါတေး-ဂန်ဒူဇီ အလဲအထပ်အတွက် ဆွေးနွေးနေ
အမ်တီတီကို ပြန်လည်စောင့်ကြည့်နေပြီး စပို့တင်းချာတိတ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခြေနည်းတဲ့ အာဆင်နယ်
ကျောနံပါတ် ၇ ပေးအပ်မှုနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဆာကာ
မဆုံနိုင်သေးတဲ့ ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလူကို ပြန်ကြိုးစားဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆာလီဘာ